Alahady – 11/01/2015 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady – 11/01/2015 – Toriteny
Post author:Ekar Anjomakely
Ny nanaovana Batemy ny Tompo
Ny alahady manaraka ny Epifania dia mankalaza ny Batemin’ny Tompo isika isan-taona Ny “Epiphanie” moa dia ny fisehoan’ny Tompo fa ny fankalazana ny Batemin’ny Tompo kosa dia antsoina hoe “Théophanie”. Ny “Théophanie” dia ilay fisehoan’Andriamanitra na koa hoe Andriamanitra no miseho. Tamin’ny herin’andro i Jesoa no niseho fa izao kosa Andriamanitra no miseho amin’ny alalan’ny teny ambarany tamin’ny nanaovana batemy an’i Jesoa teo amin’ny onin’I Jordany. Ny mpanoratra ny Evanjely telo dia samy mitantara ny nanaovana Batemy ny Tompo avokoa: Matio, Marka ary Lioka. Taorian’ny nitantaràna ny nahaterahan’i Jesoa dia avy hatrany dia ny nanaovana Batemy Azy. Ireo Evanjely telo ireo dia mitantara an’i Joany Batista nanao batemy tao amin’ny onin’i Jordany. Izany ony izany dia avy any ambony ka midina hatrany amin’ny ranomasina maty, eo amin’ny roapolo sy roanjato (220) kilaometatra eo ho eo ny halavany ary eo amin’ny efatra amby telopolo sy sivinjato (934) metatra ambanin’ny ranomasina eo ho eo ny halaliny. Tsy misy aina mety ho velona ao amin’izany ranomasina maty izany na ireo zava-maniry, na ireo trondro noho ny sira mahery be ao anatiny. Rehefa hoentin’ny rano ny trondro hankao amin’io ranomasina io dia miverina miakatra izy ireo, izany hoe, mafimafy kokoa ny ezaka ataon’ireo trondro ireo mba tsy ho faty ao amin’izany ranomasina izany (manavotra aina izy). I Joany Batista manao Batemy eo amin’ny onin’i Jordany io dia misy dikany, midika izany fa misy ezaka tokony hiomànana eo amin’ny fidirana ho zanak’Andriamanitra. Batemim-pibebahana no nataon’i Joany Batista nefa mba nanantona hatao batemy koa i Jesoa. Rehefa nitsangana avy tamin’ny rano Izy dia nisokatra ny lanitra ary ny Fanahin’Andriamanitra nidina nàka endrika voromahailala. Ny dikan-teny hafa moa dia milaza hoe: “Rovitra ny lanitra…” izany hoe mifono hevitra “hery”. Andriamanitra niteny tamin’i Jesoa nanao hoe: “Ianao no Zanako malalako, Ianao no ankasitrahako” ary henon’izay nanatrika teo rehetra izany teny izany na dia ny demony aza. Rehefa vita Batemy I Jesoa dia nentin’ny demony halaina fanahy tany an’efitra ary izany no dinihintsika rehefa vanim-potoanan’ny Karemy. “Raha Zanak’Andriamanitra Ianao, ataovy tonga mofo io vato io”, izany hoe asehoy ny maha zanak’Andriamanitra Anao fa i Jesoa tsy nanaiky izany famitahan’ny demony Azy izany.
Voalaza tao amin’ny teny fampidirana fa ny Batemin’i Jesoa dia tandindon’ny Batemintsika.
Ny Papa Joany Paoly faharoa nankany France ary nahita soratra lehibe teo amin’ilay toerana nalehany hoe: “Nataonao inona ny Bateminao?”. Inona no ezaka ataonsika anehoana an’Andriamanitra? Omena maimaim-poana ny Batemy araky ny voalazan’i Izaia Mpaminany fa kosa misy zavatra takina ho amin’ireo izay miomana handray sy efa nandray ny Batemy.
Inona moa ny fahasoavana azo avy amin’ny Batemy? Mahatonga antsika ho inona moa ny Batemy? Ny Batemy dia mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra, ho zanakin’ny Eglizy ary mahatonga antsika ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Sakramenta hahaterahana ara-panahy izany. Eto dia ilay hoe mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra no ho dinihina ary tsy misy voro-manga hiteraka vorondolo fa zanak’Andriamanitra isika dia mitovy amin’Andriamanitra manao tahaka izao fanoharana manaraka izao. Ao an-trano isika manana mpanampy indraindray, ary ny zanaka tsy hitovy velively amin’ny mpanampy. Ny mpanampy dia noho izy mpikarama no antony hanaovany ny raharaha fa ny zanaka kosa mpandova. Raha misy ny raharaha atao ao an-trano dia ho ataon’ny zanaka izany noho izy mahatsiaro tena ho tompon-trano. Toy izay koa isika rehefa mandray andraikitra ao amin’ny Fiangonana. Tokony hanontany tena isika hoe : “Izaho manao adidy ve mahatsiaro tena ho zanak’Andriamanitra sa tsia?” sa manao izany noho izy adidy fotsiny ihany, na koa mieritreritra ny hena-maso na mieritreritra ny tombony ho azo amin’ny fanaovana izany adidy izany. Raha izany no eritreritra hoantetsika miatrika ny asan’Andriamanitra dia tsy mahatsiaro tena ho zanak’Andriamanitra isika. Raha ny tranotsika aza vitantsika ny mikarakara azy maika moa fa ny tranon’Andriamanitra. Ny tranontsika anefa tsy ho nahazo azy isika raha tsy noho Andriamanitra. Zanak’Andriamanitra isika ka tsy tokony hisalalsala hanao ny andraikitra ao am-Piangonana. Matetika koa anefa dia ireo izay miezaka miasa ihany no enjehin’ny olona. Koa andeha ary mba hanahaka ireo trondro hoentin’ny rano avy amin’ny onin’i Jordany mankao amin’ny ranomasina maty izay niezaka niverina niakatra na dia sarotra aza ny lalana Toy izany koa, misy ady ataontsika isan’andro mba anehoana ny endrik’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika saingy tsy mora izany. Izany no mahatonga antsika mivavaka isan’andro, hanamafisantsika ny finoana mba ahafahantsika miady.
Toriteny Alahady 25 Febroary 2018
Alahady 18/10/2015 : Toriteny
Toriteny Alahady paka 01 Aprily 2018
Vaovao ato @ pejy facebook
Copyright 2020 - Ecar Sainte Anne Anjomakely